Articles Published in November, 2012 | Sagal Radio Services
Golaha ammaanka QM oo hal toddobaad u kordhiyay ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2012
Golaha amaanka ee QM, ayaa muddo kordhin hal toddobaad ah u sameeyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM.
Tababar Jabuuti loogu soo xiray saraakiil ka tirsan ciidammada xoogga Soomaaliya
Tababar ku saabsan dhowrista xaquuqda bini aadamka iyo heshiisyada caalamiga ah ee qeexaya xaquuqda dadweynaha, ayaa afartan sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya loogu soo gaba gabeeyay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti maanta.
Deeq lacageed oo la gaarsiiyay naafada Baladweyne ku dhaqan
Deeq lacago ah oo ay iska so aruuriyeen jaaliyadda gobolka Hiiraan ee ku dhaqan magaalada London dalka Ingriiska, ayaa maanta loo qeybiyay qaar ka mid ah naafada ku dhaqan Baladweyne.
Kismaayo iyo Muqdisho oo howl gallo dad iyo hub lagu soo qab qabtay
Ciidamada huwanta ah ee Kismaayo jooga, ayaa maanta howl gallo lagu soo qab qabtay hub iyo dad badan ka sameeyay gudaha magaalada Kismaayo oo xarrun u ah gobolka Jubada Hoose.
Booliska Muqdisho oo fashiliyay weerar lagu qaadi lahaa garroonka dayuuradaha ee Aaden Cabdulle
Sagal Radio Services • News Report • November 2, 2012
Taliyaha ciidamada booliiska gobolka banaadir, Col. Axmed Xasan Maalin ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay u suuro-gashay inay gacanta ku dhigaan xalay koox qorsheynayay inay weeraraan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Mahiga oo ammaanay AMISOM, kana hadlay qodobbo kale
Ergayga xoghayaha guud ee Qaramada Midoobayh u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, dajire Augustine Mahiga oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay howgallada ciidamada AMISOM iyo dhismaha xukuumadda Soomaaliya.
QM oo xafiisyo ka furaneysa Kismaayo
Sagal Radio Services • News Feature • November 2, 2012
Hay'ado ka tirsan kuwa Qarammada Midoobay oo ku shiray magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay inay ka bilaabayaan howlahooda gargaarka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay bishii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howgalka AMISOM.
Annadif to lead AU Somalia mission
The Africa Union has appointed a new head of its mission in Somalia. Mr Mahamat Saleh Annadif, from Chad, is also the commission’s new special representative to the war-torn country.
Uganda oo ciidammadeeda Soomaaliya kala baxeyso
Dowladda Uganda, ayaa sheegtay in dhammaan howl gallada ay ka waddo gobolka ay joojin doonto, ayna ciidammadeeda kala soobaxeyso dalalka Soomaaliya, Jamhuurriyadda Dimuqraaddiga Congo, iyo Jamhuurriyadda Afrikada dhexe.